ယေရှုခရစ်တော် | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ | Page 2
သခင်ယေရှု၏မေးခွန်းနှစ်ခု December 10, 2009
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 9:49 am
လူများက ငါ့ကိုမည်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသနည်း? သင်တို့လည်း ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ သနည်း?
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များကတော့ ယေရှုခရစ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယေရှုသည် လူသားများထဲတွင် အင်္ကြးမြတ်ဆုံးသော လူသားတစ် ယောက်သာမကပါ။ သင်သည် သူ၏ အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာ လေလေ ပိုမိုလေးစားကြည်ညို လေလေဖြစ်ပေမည်။ ကျော်ကြားသောဘုရားမဲ့ဝါဒီများကပင် သခင်ယေရှု၏ အနှိုင်းမဲ့ ကြီးမြတ် ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် မည်သူမျှတုနှိုင်း၍ မမှီနိုင်သော သူ၏ပေးဆပ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများမှာ-
ပြင်သစ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ရီနင်က “အနာဂတ်တွင် အံ့ဩဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်လာလိမ့်ဦး မည်သို့သော်သေချာတာ တစ်ခုကသခင်ယေရှုကိုတော့ မည်သူမျှ ကျော်လွန်နိုင် မည်မဟုတ်” ဟု ဆို၏။
ပြင်သစ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ရူဆိုးက သခင်ယေရှုကိုဆိုကရေးတီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ “ဆိုကရေးတီး၏ အသက်ရှင်လုပ်ဆောင် ခဲ့မှုများကြောင့် ၄င်းအား အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဟုသတ်မှတ်လျှင် သခင်ယေရှု၏ အသက်ရှင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်၍ ယေရှုသည် ဘုရား ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်” ဟုဆိုခဲ့သည်။
စစ်သူကြီး နပိုလီယန်က “ကျွန်ုပ်လူများ စွာသိခဲ့ပါသည်သို့သော် ယေရှုသည် လူသားသက်သက်မျှ မကပါ” ဟုဆိုခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာကြီး လော့ဘိုင်ရွန်က “အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သာ ဘုရားဖြစ်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ဘုရားသာ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့လျှင်ယင်းသည် သခင် ယေရှုပင်ဖြစ်သည်”ဟုဆိုခဲ့သည်။
စာရေးဆရာတစ်ဦးကလည်း “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းသမျှသောစစ်တပ်ကြီးများ၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့ သမျှသော အာဏာရှင်အဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ခဲ့သမျှသောဘုရင်များ အားလုံးတို့၏ လူသားတို့အပေါ် ဩဇာ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုများကိုပေါင်းစည်းခဲ့လျှင် ယင်းသည် ယေရှုဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၏ လူသားတို့အပေါ် ဩဇာသက်ရောက်နိုင်မှုကို မှီနိုင်မည် မဟုတ်ပေ” ဟုရေးသားခဲ့ပါသည်။
ဂျူးလူမျိုးသမိုင်းပညာရှင် ဖလေးဗိယပ်က သခင်ယေရှု၏ဘဝနှင့် အသက်ရှင်မှု ကို လေ့လာပြီး ယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်သည်ဟု ခိုင်မာစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျာမနီပြည်၌ အထင်ရှားဆုံးသော စာပေဂီတ ပါရမီရှင်ကြီး ဂျိုဟန်က သခင်ယေရှုအားသန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သော ဘုရားဟု ခေါ်ခဲ့ပြီး အကယ်၍ဘုရားသည် ကမ္ဘာပေါ်သို့ တစ်ကြိမ် တစ်ခါကြွလာခဲ့သည် ဆိုလျှင်ယင်းသည် ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့်ကြွလာခဲ့ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ပြုခဲ့သောအမှုနှင့် မိန့်ဆိုချက်အချို့
ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် တိကျမှန်ကန်သော အသိတရားအုတ်မြစ်ပေါ်၌ တည်ဆောက်ထား၍ သခင်ယေရှု မိန့်ဆိုချက်များကို ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းလေ့လာနိုင်ရန် ယေရှု၏ မိန့်ဆို ချက်အချို့ကို ဖေါ်ပြလိုပါသည်။
မွေးရာပါ မျက်စိကန်းသောသူကို ပြန်မြင်စေသော အခါ ယေရှုက ငါသည် လောက၏အလင်းဖြစ်သည်။
ငါးထောင်မကသောသူများကို မုန့်ငါးလုံး နှင့် ငါးနှစ်ကောင်အားတန်ခိုးနှင့် ပွါးစေလျက် လူများ ဝစွာစား ပြီးသောအခါ ယေရှုက ငါသည် အသက်မုန့် ဖြစ်သည်။
ယေရှုအားအဆုံးစီရင်မည့်နေ၌ ဘုရားသခင်၏သားတော် ဟုတ်မဟုတ် မေးသောအခါ ယေရှုက သင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်၏။
ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ တပည့်တော်သော မကမြင်လျှင် အကျွန်ုပ်၏အရှင် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ပါတကားဟု ဆိုသောအခါ ယေရှုက ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏။
သေပြီးလေးရက်ရှိပြီဖြစ်သော လာဇရုကို သင်္ချိုင်းဂူမှ ပြန်ရှင်စေပြီး ယေရှုက ငါသည် ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း အသက် ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ငါ့ကို ယုံကြည် သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 9:31 am
ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းရှင်ဟုဆိုလျှင် ယေရှုကိုမည်သူဖန်ဆင်းပါသနည်း။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၏အတ္ထုပ္ပတိကိုဖေါ်ပြပေးပါ?
ကကြီး ၏ အရှေ့တွင် မည်သည့် အက္ခရာရှိပါသနည်း။ အ၏အနောက်တွင် မည်သည့် အက္ခရာရှိပါသနည်း။ အမှန်တရား တစ်ခုသည် လူသားတို့၏ နှလုံးသား ထဲသို့ရောက်ရှိကာ အမြစ်စွဲလက်ခံယုံကြည်နိုင်ဖို့ လူတို့၏ ဦးနှောက်အသိကို ဖြတ်သန်းရပါသည်။ ဒါဆိုလူတို့၏ ဦးနှောက်အသိတရားက ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ ဟုဆိုလျှင် ရူပဗေဒနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါက်တာ အိုင်စတိုင်းကလူသည် စကြာဝဠာကြီး တစ်ခုလုံး၏ အပုံတစ်ရာပုံတစ်ပုံထက်နည်းသော အသိဥာဏ်ကိုသာပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန် ၉၉% ကျော်သည် ဘုရား၏ ဥာဏ်တော် တန်ခိုးတော်များပင် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ် ပညာတစ်ခုတည်းပင် လူတို့လေ့လာ၍ မကုန်နိုင်သေးပါ။ သိပ္ပံပညာ စတင်တိုးတက်လာသောအခါ ဘုရားကို အန်တုနိုင်မည်ဟု လူတို့စိန်ခေါ်ခဲ့ကြသော်လည်း အမှန်တကယ် စူးစမ်းလေ့လာကြည့်သောအခါ အံ့မခန်းမကုန်နိုင် မသိနိုင် ဖြစ်ကာ ဘုရားကို ဝန်ခံခဲ့ရပေသည်။
ထိုအနန္တတန်ခိုးတော်ရှင်ဘုရား၏အကြောင်းကိုသိဖို့ ပင်လယ်ရေအားလုံးအား ရေနွေးခရားအိုးထဲထည့်ဖို့ ကြိုးစားသူနှင့်တူပေလိမ့်မည်။ ထိုအရှင်၏ အတ္ထုပ္ပတိကို လူတို့သည် သိနိုင်ပါမည်လား။ သိနိုင်ပါကလည်း ထိုအရှင်သည် ဘုရားဖြစ်နိုင်ပါ မည်လား။ ဘုရားသည် အလွန်ကြီးမြတ်လွန်း၍ လူတို့ကြံစည်၍ပင်မမှီနိုင်ပါ။ လူတို့၏ အကျင့်အကြံနှင့် ဘုရား၏ အကျင့်အကြံသည် မိုးနှင့်မြေ ကွာခြားသကဲ့သို့ ကွာခြားကြောင်း ကျမ်းစားက ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်း တို့၏ မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ အရှင်သည် ဘုရားဖြစ်ပါသလား သို့တည်းမဟုတ် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး၏ အပုံတစ်ရာပုံတစ်ပုံထက်နည်းသော အသိဥာဏ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်သည့် လူထဲက လူဖြစ်ပါသလား ဆိုသည်ကို အကျိုးအကြောင်းနှင့် ခွဲခြား သိမြင်တတ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ လူသည် အကန့်အသတ် ဘောင်တစ်ခု အတွင်းမှာ သာရှိပြီး ဘုရားဟူသည် အကန့်အသတ်မဲ့သော အနန္တ ဖြစ်ပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို လူတို့မမြင်ဘူးကြပေမည့် ယေရှုဟူသောလူ့ခန္ဓာဖြင့် ကမ္ဘာလောကသို့ ကြွလာခဲ့ဘူးပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ၏ပြုခဲ့သောအမှုနှင့် အဆို အမိန့်တို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်ကဲ့သို့သောသူ ဖြစ်ကြောင်း ကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ပြုခဲ့သောအမှု၊ အဆိုအမိန့်နှင့် သမိုင်းအထောက်အထားတို့က အခိုင်အမာ တည်ရှိနေပါသည်။ (ဟေရှာယ ၅၅း၈၊ ဆာလံ ၁၄း၁၊ ယောဘ ၁၁း၇)
ယေရှုသည် လူ့ဇာတိ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဘုရားဇာတိဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါသနည်း ?
ဘုရားမှလူ့ဇာတိခံယူခဲ့သော ယေရှုတွင် လူ့ဇာတိ ၁၀ဝ% နှင့် ဘုရားဇာတိ ၁၀ဝ% ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် ယေရှုဘုရား လူ့ဇာတိခံယူစဉ် ဘုရား၏ ဇာတိတန်ခိုးကို လုံးဝအသုံးမပြုဘဲ လူ့ဇာတိအပြည့်နှင့် ဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ မစမှုကိုယူကာ ခမည်းတော် ဘုရား၏ အလိုတော်နှင့်အညီ တန်ခိုးနိမိတ်သက်သေ များကိုပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။ ငါပြုသောအမှုတို့ထက်သာ၍ ကြီးမားသော အမှုတို့ကိုပင်ပြုလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု သည် ဘုရားဖြစ်၍ ကျင့်နိုင် လုပ်နိုင်သည်ဟု ပြောဆိုအကြောင်းပြပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ လူအချို့က လူ့ဇာတိခံယူလာသော ယေရှု၏ သက်တော်စဉ် တွင် ဘုရားဖြစ်ခြင်း၏ပြုခဲ့သော သက်သေများကို မယူဘဲ လူသားဖြစ် ခြင်း၏ အပြုအမူများတို့ကိုယူကာ ယေရှုသည်ဘုရား မဟုတ်ဟု ဝေဖန်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမြင်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အမှန်တရားကို ရှာဖွေကတွေ့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 9:27 am
ယေရှုဘုရားတစ်ပါးတည်းက လူသားအားလုံး၏အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားပြု နိုင်ရခြင်းမှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း?
ယေရှုသည် ဘုရားနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်း ထားသောလူသားများ အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် မရှိသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးခြင်းနှင့် တန်ခိုးနိမိတ်များစွာတို့ကိုပြုခဲ့ခြင်းက ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေများပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ယော ၁း၁-၁၄)
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 9:21 am
ယေရှုကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူသည် လောက၏ဒုက္ခဆင်းရဲများ မှ လွတ် မြောက်နိုင်ပါသလား?
ယေရှုက သင်တို့သည်လောကတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းမစိုးရိမ်နှင့် ငါသည်လောကကိုအောင်ပြီဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပါဝင်ပြီး ယေရှု၏ အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြသော ယေရှု၏ တပည့်တော်များပင် ဂါလိလဲအိုင်တစ်ဖက်ကိုလှေဖြင့်ဖြတ်ကျော်စဉ် လေမုန်တိုင်းဘေးနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုစဉ်အခါ ယေရှုဘုရားက တပည့်တော်များ အား မုန်တိုင်းဘေးမှ ကယ်တင်ခဲ့သလို ယနေ့ ယေရှုကို ကိုးစားသူများအားလည်း အခက်အခဲတို့မှ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော ဘုရားဖြစ် ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ ဘဲဖြစ်ပါသည်။ (ယော ၁၆း၃၃၊လု ၈း၂၂-၂၅၊ ဟေဗြဲ ၁၃း၈)
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 9:16 am
ယေရှုဘုရားအား လက်ခံယုံကြည်သူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်း လုံးဝ မခံရတော့ ဘူးဟု ဆိုလိုပါသလား ?
(ရောမ ၁၄း၁၀) တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက – ငါတို့ရှိသမျှသည် ခရစ်တော် ၏ တရားပလ္လင်တော်ရှေ့သို့ ရောက်ရကြမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ (၁ ကော ၃း၉-၁၅) တွင် ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ချလျက်ရှိသော တိုက်မြစ်မှတပါးအခြားသော တိုက်မြစ်ကို အဘယ်သူ မျှမချနိုင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါပါဘဲ မိမိဇာတိနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှ ထိုအချိန်တွင်အချည်းနှီးဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။ ယေရှုပြောသော အခွက် ၅၀၊ အခွက် ၂၀ ၊ အခွက် ၁၀ ဥပမာကိုပြန်ကြည့်သောအခါ ဘုရားက လူတို့အားပေးထားသည့်အစွမ်းခြင်းမတူပါ။ သို့သော် မိမိမှာ ရှိသည့်အစွမ်းအစလေးနှင့် ဆက်ကပ်အသုံးတော်ခံဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ဘီလီဂရေဟမ်ကဲ့သို့ အခွက်ငါးဆယ်နှင့် အသုံးတော် မခံနိုင်လည်း မိမိမှာရှိသည့် ဆယ်ခွက်နှင့် အသုံးတော်ခံဖို့ ဘုရားကအလိုရှိပါသည်။ ထိုဥပမာတွင် အခွက် ၅၀ ခံရသူနှင့် အခွက် ၂၀ ခံရသူ ရရှိမှုမှာ မတူသော်လည်း အလုပ်လုပ်သော ထိုသူနှစ်ဦးလုံးအား ဆုပေးတာချင်းတော့ အတူတူဆိုတာကိုတွေ့ရပါသည်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိသည် အစွမ်းအစလေး နဲ့ဘုရားကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါ။ မိမိတွင် သုံညများစွာရှိနေပါစေ ထိုသုံည၏ရှေ့တွင် တစ်တည်းဟူသော ခရစ်တော်ကို ထားလိုက်ပါက တန်ဘိုးရှိသောအသက်တာ သာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြစ်လာကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၁. လူတို့ကို အပယ်ငရဲမှ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်
၂. လူများ လောကတွင် အသက်ရှင်စဉ် ပညတ်နှင့်သီလတို့ကို စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်စွာကျင့်နိုင်ရန် သူ့ကိုယုံကြည်သူ၏ အထဲမှ ဝိညာဉ်တော်က ကူမခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန်တို့၏ အကျင့်တရားဆိုသည်မှာ မိမိညာဖက်ပါးကို ရိုက်လျှင် ဘယ်ဖက် ပါးကိုပါထပ်၍လှည့်ပေးရဦးမည်။ မိမိအား အနိုင် အထက်ပြု၍ ခရီးတစ်တိုင် သွားခိုင်းသူအား အလုပ်အကြွေးပြုကာ ခရီးနှစ်တိုင် ဆက်သွား ရဦးမည်။ ရန်သူကို ချစ်ရမည်ဟူသော ယေရှု၏ သဘာဝလွန် ပညတ်ချက်တို့ကို ယေရှုဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်မစမှုမပါပါဘဲ ကျင့်နိုင်ဖို့ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
လူအချို့က မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန်ပျင်းရိသည့်အတွက် အလွယ်လမ်းလိုက်လိုသူတို့သာ ယေရှုကို ကိုးကွယ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ ပါသည်။ မဟုတ်ပါ ပညတ်နှင့်သီလတို့ကို စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်စွာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်လိုသူတို့သာ ယေရှုကို ကိုးကွယ်ကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။